မိတ်ကပ်သားကြာရှည်လည်းခံမယ် အပြစ်အနာအဆာအားလုံးကိုလည်း ဖုံးအုပ်ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်ရော! | CosmeticMyanmar
Home » Article » မိတ်ကပ်သားကြာရှည်လည်းခံမယ် အပြစ်အနာအဆာအားလုံးကိုလည်း ဖုံးအုပ်ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်ရော!
ယခုလက်ရှိ မိမိအသုံးပြုနေတဲ့ Foundation အဆင်မပြေလို့ စိတ်ညစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ ဒီစာလေးကို ဖတ်ကြည့်စေချင်ပါတယ်။ ကိုယ်အသုံးပြုနေတဲ့ Foundation ဟာအပြစ်အနာအဆာတွေတော့ ဖုံးအုပ်ပေးနိုင်ပါရဲ့ ကြာရှည်မခံတာကြောင့် စိတ်ညစ်နေတာမျိုးတွေ တချို့ Foundation တွေကျပြန်တော့လည်း လိမ်းထားတဲ့အခါ ကြာရှည်တော့ခံပါရဲ့ အပြစ်အနာဆာတွေ ဖုံးအုပ်မပေးနိုင်လို့ Concealer တွေအထပ်ထပ်သုံးနေရတာမျိုးတွေကြောင့် စိတ်ညစ်နေတာမျိုးတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အခုလိုပြဿနာတွေကနေ ကင်းဝေးပြီး ၂မျိုးလုံး သုံးလို့အဆင်ပြေစေမဲ့ Make Up Foundation လေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။
ဒါလေးကတော့ Loreal Paris ကထုတ်လုပ်ထားတဲ့ NEW INFALLIBLE LIQUID FOUNDATION လေးဘဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ Foundation လေးကတော့ 24Hr ထိ မိတ်ကပ်သားကို ကြာရှည်ခံနိုင်မှု ပေးနိုင်ပါတယ်။ Flawless Coverage ဖြစ်တဲ့အတွက် မိမိမှာရှိတဲ့ အပြစ်အနာအဆာတွေကို ဖုံးအုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ moisturizer ပါတဲ့အတွက် ခြောက်သွေ့မှုကိုလည်း မဖြစ်စေပါဘူး။ အဆီပြန်ခြင်းကိုလည်း ထိန်းသိမ်းပေးနိုင်ပါတယ်။ တောက်ပြောင်စိုပြေပြီး Healthy Glow ဖြစ်တဲ့ Make Up Look မျိုးကို ရရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လို skin အမျိုးအစားမဆို အသုံးပြုလို့ ရပါတယ်။ အရောင် ၇ရောင် ရရှိနိုင်ပါတယ်။
သူ့ရဲ့ အသုံးပြုပုံကတော့ မိမိသုံးနေကြ Foundation တွေ အသုံးပြုသလို လွယ်ကူစွာ အသုံးပြုပေးနိုင်ပါတယ်။
Image Source : https://www.lorealparis.com.au/
Eyeshadow & Highlighter ၂မျိုးလုံးသုံးလို့ရမယ့် Rihanna ရဲ့ Fenty Beauty